I-Stitchmaps, iingxaki eziqhelekileyo-iGeofumadas
Epreli, 2011 Google umhlaba / imephu
I-Stitchmaps yaba enye yezona zicelo eziphambili ezenziwe ukudala ii-orthophotos kwiimifanekiso ezifakwe kwiGoogle Earth, ukusuka indlela esebenza ngayo Ndathetha ixesha elidlulileyo.
Ngubani owenze inkqubo ngaphambili, ngeenyawo, ukukhuphela i-skrini kwiGoogle uze ujoyine nabo nge-PhotoShop okanye Bentley Descartes, Siyazi ukuba i-Stitchmaps yenza okungaphezulu kunoko. Ukubanjwa ngalunye kufuna ulungelelwaniso olukhethekileyo malunga nolwangaphambili; ukuyenza ngesandla unokubona ukuba isikwere ngasinye sinokujikeleza okuncinci okunyusa umgca ogobileyo, owenziwa nguGoogle ngenjongo kwaye nangenxa yokuba ukumelwa okuthe tyaba kokugoba komhlaba. Ke into eyenziwa nguStitchmaps kukubamba ifayile ye- stream ngokuthe ngqo kwi-ActiveX kwaye uyayilungisa ngokubhekiselele kumbhalo womfanekiso owenzayo ekuqaleni, ukusika iingcambu nje kwiinkcukacha zokulawula ezibonakalayo xa silanda ifayile yokulinganisela kwi-Ozy Explorer.
Ngenxa yeso sizathu iiseva zikaGoogle zomhlaba azinakho ukubona ukhuphelo, njengoko kwenzekile kwi-GIS ephindiweyo, ethintele i-IP. Kodwa kule meko, ukubanjwa kwenziwa kwi-ActiveX.
Emva kweminyaka emibini yokuyisebenzisa, apha ndiphendula imibuzo endiyifumana kuyo:
1.Ukhuphela phi iStitchmaps?
Lo mbuzo uhlala ungaphendulwanga, ngelishwa indawo eyayisasazileyo ayisebenzi. Emva kwethutyana bonwatyiswa sisimangalo esisemthethweni kuGoogle sokuhambisa inkqubo yorhwebo eyaphula imigaqo yayo. Banoyolo abo kuthi bachitha imali elinganayo nokuthatha intombazana ngamehlo ayo amnandi ukuya kwindawo yokutyela e-la maphepha, kuba ayisenako ukuthenga. Asinakubona enye inguqulelo ephezulu kuneStitchmaps 2.6 esithengiswayo, hayi nge-US $ 49. Kuya kufaneleka ukuyithenga ngelixa kubonakala ngathi kukho ukufumanekaUkuthengwa kweAra kwiSabelo!, nangona ayifumaneki kwiilingo zokulanda.
Lumka, inyani yokuba ingasekho akuthethi ukuba kusemthethweni ukuyikroba. Ngendlela, iinkqubo ezininzi endizibonisayo kule post, zinenguqulo yeStitchmaps Plus 2.6 kuphela, ezinye azisebenzi kwiinguqulelo 2.5 okanye ngaphambili.
2. Ngaba lulwaphulo-mthetho ukukhuphela imifanekiso ngeStitchmaps?
Ayilolwaphulo-mthetho ukusebenzisa isicelo esisithenge ngokusemthethweni. Ayilolwaphulo-mthetho ukukhuphela imifanekiso kuGoogle kwaye uyijoyine, nokuba sisebenzisa le nkqubo okanye indibaniselwano ye isikrini kunye neempendulo ezimbalwa zokusika imiphetho kunye nokuguqula iintloko zomfanekiso ngamnye. Luluphi ulwaphulo mthetho ukusebenzisa imifanekiso kaGoogle ngeenjongo zorhwebo ngaphandle kwemvume yabo, ke ukuba ziya kusetyenziselwa oomasipala apho utshintsho lukarhulumente rhoqo kwiminyaka emi-4 lususa inzuzo ye-cadastre, sinokuthi ayilolwaphulo mthetho. 🙂
3. Kutheni ndingakwazi ukugcina umfanekiso?
Iinguqu ezikhokhelwayo kuphela zigcina umfanekiso, iinguqulelo zezilingo zithatha kuphela kwaye zibonisa ukuba i-mosaic yayibukeka njani.
4. Yeyiphi inguqulelo kaGoogle Earth iStitchmaps esebenza nayo?
Sebenzisana nayiphi na inguqu, unonophelo olutsha linconywayo.
5. Kutheni ixhoma xa ugcina umfanekiso?
Oku kuyakwenza kwiimeko ezininzi kuba sineengxaki zememori ye-RAM. Ngokwesiqhelo, le nkqubo iqhuba, kwaye xa sele uza kugcina umyalezo uvela othi "Akukho lawulo oluvumelekileyo", Emva koko umyalezo onyelisayo uboniswa ngesiJamani kwaye uyaxhoma ungaze ugcine umfanekiso. Kukho izinto ezahlukeneyo eziphembelela oku, ukubathathela ingqalelo kungasinceda ukuba singawi imemori:
Ifomathi yokugcina, kucetyiswa ukusebenzisa i-jpg, kuba nangona sikhetha i-tiff, umgangatho womfanekiso awuyi kuphucula, kodwa ngokubuyisela kuya kulubala ubuninzi be-MB.
Ubungakanani bokubanjwa kwendawo kucetyiswa i-512 × 512. Kwangokunjalo, ukukhetha iindawo ezinkulu akuxhamli konke konke, kuba ukubanjwa kweStitchmaps kukwenza isikrini.
Umgangatho wokunciphisa we-jpg ukhuthazwa i-70.
Ifomathi ye-pixel icetyiswa ngama-bits angama-24, ukuze igcine iithowuni. Nangona ukusebenzisa i-16 bits kungatshintshi into enkulu.
Kananjalo ayifanelekanga ukwenza iithayile ezinkulu kakhulu. I-10 × 10 mosaic iya kuphuma ngokukhawuleza okukhulu, kodwa i-24 × 24 inye ifuna ukuba ikhompyuter ibe nememori ye-RAM ngaphezulu kwe-2 GB. Kukhethwa ukuba uye ezantsi, kunye nokuphakama okujikeleze iimitha ezingama-400.
Kukulungele ukuvula inketho "Ukugcina ngokuzenzekelayo umfanekiso wemephu", Ngoko ukuba ngaphambi kokuba uthumele umzobo ogqityiweyo uye ulondoloze oko, ngoko ke xa ukhululekayo akukhathazeki.
Ukongeza, kuyacetyiswa ukuba ungabinazo iinkqubo ezininzi ezivulekileyo ngelixa i-Stitchmaps isebenza, njengoko zilayisha i-RAM ngokungeyomfuneko. Ndincoma ukuvala ezinye iindlela ezongezelelweyo, ndisebenzisa umphathi womsebenzi nge ctrl + alt + del kwaye uvale iinkqubo ezingadingekile njengeTunes umncedisi, i-Google update, i-HPutilities, i-Adcrobat umfundi, Njl
I-watermark yeGoogle okanye ikhampasi ibonakala
Ukuthintela ukubanjwa ngakunye ekuthatheni idatha eya kuthi kamva ichithe i-mosaic, kuya kufuneka ucime ikhampasi kunye nebar yomhlaba kaGoogle. Ihlala yenzeka xa unesisombululo esisezantsi kakhulu kuseto lokujonga, isiqwenga selogo kaGoogle siyavela kumfanekiso ngamnye; oku kusonjululwa ngokwandisa indawo ethe tyaba eboniswe njenge “Imephu evulekileyo”. Ngokubanzi, i-10% isebenza kakuhle, kodwa inokuthathwa iye kwi-15 okanye i-20 ukuba kukho imfuneko.
Indlela yokwenza umzobo umfanekiso.
Kukho ezinye iindlela zokwenza, ngokuthe ngqo ngenkqubo ye-GIS exhasa i-kml kunye nokulungiswa kwemifanekiso. Kwimeko yam ndisebenzise le nkqubo ilandelayo:
KwiGoogle Earth ndizobe ikota yesibhozo yendawo endinomdla wokuhla kuyo, ndisebenzisa umzobo wepoligoni kunye nokhetho olunye kuphela. Kwimeko apho inkulu kakhulu, ndongeza imigca eyongezelelweyo ukwenza igridi.
Emva koko, phantsi kombhalo wonke, ushiya olo luhlu oluqukethe ipolgoni, ukuze lugcinwe lufakwe emfanekisweni wokugqibela.
Ndigcina ipoloni njenge-kml
Ndiyivula ngenkqubo ye-GIS, njenge-Manifold GIS okanye i-gvSIG.
Ndikwabela ukubonakaliswa usebenzisa iGoogle Earth, izilungelelaniso zeendawo zokubala, ubude kunye neDatum WGS84
Emva koko, ndatshintshisa uvavanyo ngokumisela UTM kunye neDatum yomdla (Umzekelo weNdawo ye-18 emaNtla, kunye neDatum WGS84)
Ndiyithumela kwi-dxf ukuyivula njengefayile ye vector kwinkqubo ye-CAD.
Emva koko, kwiprogram ye-CAD, enokuthi i-Microstation okanye i-AutoCAD, ndiyifonele ngomfanekiso ngokukhetha ukuyibeka phantsi kwaye impi esebenzisa njengemvelaphi yamacangca adwetshiwe kwimephu kwaye njengendawo ekuya kuyo iikona ze-polygon vector.
Ixesha elifanelekileyo lokukhuphela ebusuku. Ngokukodwa kuba unokuthwala i-mosaic enkulu kwaye uye kulala ixesha elithile okanye ubukele iTV. Ukuze ungachithi ixesha kwaye uza nezinto ezimangazayo, kufuneka ukhumbule ukuba awufanelanga ukuba usebenzise enye inkqubo kuba usetyenziso olunikezayo luzakulayishwa kwi isikrini imifanekiso echitha yonke imisebenzi yakho.
Susa kwakhona izikhuseli zescreen ezinokuthi zisebenze kungabikho ntshukumo yemouse, okanye izixhobo ezonga amandla ezicima esweni okanye ziqhuba nzima emva kwexesha elithile.
Ezinye iindlela ezikhoyo kwiStchmaps Allallsoft, kunye ne-Civil 3D yenza into nangona ubukhulu kunye nokunciphisa izilungiso, I-PlexEarth ilungile y I-Google Images Downloader ezingasabonwa khona.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Woopra, ukubeka iliso kwiindwendwe ngexesha langempela
Post Next Ukuqhawula kuthenga i-Ashtech; Yintoni esinokuyilindelaOkulandelayo »
Iimpendulo eziyi-14 kwi "Stitchmaps, iingxaki eziqhelekileyo"
Njengokuba ndiyazi, akukho ndawo yokukhuphela kuyo.
Kwabo bathenge le nkqubo, iyaqhubeka isebenza ngokufanelekileyo.
Sawubona, usithi awukwazi ukuthenga, 'kodwa akukho ndawo yokuyilayisha okanye into enjalo ??? I-2.4, kodwa ayisebenzi kwakhona, uyazi into efunekayo ???
Ndidlula kuwe iposi tambienluquitas20@hotmail.com
Sawubona Max, ndiyakuyixabisa ukuba ungathumela i-2.4 inguqulelo yeemephu ze-stitch, ndiyabonga kakhulu!
Akunakwenzeka, imigaqo yale sayithi ayivumeli izenzo eziphula ilungelo lobunikazi.
Ungandinika ilayisenisi yokusebenzisa i-stitchmaps. Ndiyakwazi ukudlulisela okusebenzayo kuwe.
Molo, ngendlela efanayo, bendiya kuba sematyaleni ukuba ungandithumelela le nkqubo… Ndizamile ezi zithunyelwe kwiwebhu (uhlobo lovavanyo) kodwa azisebenzi ……. nceda i-imeyile yam ronal_rojas2003@yahoo.com
Sawubona unomdla kakhulu ulwazi lwakho, kodwa njengoko abanye bengenayo inkqubo ndiya kuyixabisa kakhulu ukuba unako ukuthumela yona yam imeyile michael_garcia_a@hotmail.com
Molo, kwenzeke into efanayo kum njengo-F.Consegal ...
Ndisandul 'ukuthenga kwaye ndihlawule i-StitchMaps kwi-ShareIt, kodwa ikhonkco lokukhuphela «http://stitchmaps.com/registered/stitchmaps.php» alisebenzi. Njengoko ndinomsebenzisi kunye negama lokugqitha elifunyenwe ngokwasemthethweni inguqulelo ye-2.6, ndingavuya ukuba kukho umntu onokuthi andinike ifayile ephumelelayo yenkqubo.
Ndithumele ii-imeyile ezifanelekileyo kuPetr Bezdecka 'info@stitchmaps.com' kunye 'nokwabelana ngayo! INkonzo yabaThengi 'kodwa abakaphenduli okwangoku.
Omnye unokunceda ngale nto.
E-elwaka yam: lokgiova@gmail.com
Hayi, awukwazi ukundinika inkqubo? Ndizamile ukuyikhuphela kwiindawo ezininzi kodwa andikwazi ukuza. Khangela kwakhona inguqulo ehlawulwayo kodwa, akukho nto, ndiya kukubulela ngokungapheliyo ukuba unako ukuthumela i fayile, siyabonga.
Yaye inqaku lihle kakhulu. Ukubulisa
I-imeyile yam cd_ed@hotmail.com
Sivuyisana ngokwabelana ngolwazi lwakho kwaye masenze ukuba sifunde kumava akho, njengoRoger ndine-2.4 inguqulo ethe yasebenza kunye ne-XP, kodwa inika iingxaki nge-W7, ndizamile ukuthenga uhlobo lwe-2.6 ngaphandle kwempumelelo, ndingavuya xa umntu enokundinika ifayile esebenzayo Yenkqubo
Awusenako ukuthenga i-StitchMaps kwi-ShareI ayisebenzi. Ndinayo inguqulelo ye-2.4 kwaye andilufumani uhlobo lwe-2.6, ndingavuya ukuba kukho umntu onokundinika ifayile ephumelelayo yenkqubo.
Kulapho ndiyithumele kuwe, kunye nokwandiswa .doc kuba i-Google ayivumeli ukuthumela iifayile .exe
F. Consegal uthi: